Ukutya okungenayo ityuwa kwaseJapan kuyilelwe iintsuku ezili-13, apho ungaphulukana khona no-5-9 kg wobunzima obugqithisileyo. Kodwa ayisiyiyo yonke into elula njengoko ibonakala.
Abantu abaninzi baqhelene nokutya ityuwa, kwaye ngaphandle kwetyuwa, ukutya kunencasa eyahlukileyo. Ke ngoko, ayinguye wonke umntu ogcina ukutya okunjalo, nangona ukunciphisa ityuwa ekutyeni kuthathwa njengeluncedo emzimbeni, kodwa akufuneki kugwetyelwe kwaphela.
Kwigama lokutya, igama elithi "isiJapan" alinanto yakwenza nokutya kwaseJapan. Ngokweminye imithombo, oku kutya kwenziwa. izondlo kwenye yeekliniki eJapan, ekusenokwenzeka ukuba seso sizathu bembiza ngayo. Ngenxa yokusebenza kwayo, ukutya ngokukhawuleza kwasasazeka kwihlabathi lonke.
Ngokokuphononongwa kwabantu abaye bakutya oku kutya, ukutya okungenayo ityuwa eJapan kunyamezelwe kakuhle, kodwa kukho abo, emva kwayo, baye ekliniki beyokufumana unyango. Ke ngoko, qiniseka ukuba ngaphambi kwako nakuphi na ukutya, musa ukonqena kwaye uye kugqirha ukuze ubonisane. Ukubuyisela impilo elahlekileyo kubiza kakhulu kwaye kunokukhokelela kwiziphumo ezingenakulungiswa.
Njengoko usazi, ityuwa egqithileyo ekutyeni inokukhokelela kwi-edema, okt ekugcinweni kolwelo emzimbeni, okuqinisekisa ubunzima obungaphezulu. Ukuba unamathela kukutya okungenatyuwa, unokulususa olu lwelo kwaye ulahle iiponti ezimbalwa.
Ukutya okungenayo ityuwa kwaseJapan kuthathwa ngokungqongqo, apho ukutya kunye neentsuku zokutya zingenakutshintshwa. Imenyu yokutya ibandakanya ukutya okusezantsi kweekhalori ngaphandle kwetyuwa kunye nezinongo. Emini, kuvunyelwe ukusela amanzi amaminerali ngaphandle kwegesi okanye iti ngaphandle kweswekile.
Imenyu yokutya yaseJapan engenatyiwa:
Isidlo sakusasa: 1 indebe yekofu emnyama ngaphandle kweswekile kunye nezinye izongezo.
Isidlo sasemini: amaqanda abilisiweyo-ii-2 ii-pcs., 1 tbsp. ijusi yetumato, ikhaphetshu ebunjiweyo.
Ukutya isidlo sangokuhlwa: intlanzi ene-steamed - i-200 gr., Ipesenti ephantsi ye-kefir - 300 ml.
Usuku lwesibini lokutya:
Isidlo sasemini: intlanzi ebilisiweyo kunye nesaladi yeklabishi.
Isidlo sangokuhlwa: inyama ebilisiweyo - i-200 gr., Ipesenti ephantsi ye-kefir - 300 ml.
Usuku lwe-XNUMX yokutya okungenatyuwa:
Isidlo sakusasa: 1 indebe yekofu emnyama ngaphandle kweswekile kunye nezinye izongezo + i-toast.
Isidlo sasemini: zucchini - 1 pc. (ngohlobo lwe-caviar okanye eyosiweyo).
Isidlo sangokuhlwa: amaqanda - ii-2 iiPC. inyama ebilisiweyo - i-200 gr., Isaladi yeklabishi.
Isidlo sasemini: iminqathe - ii-3 iiPC. (ngohlobo lwecaviar), itshizi - iziqwenga ezi-2, izagwityi amaqanda - ii-3 iiPC. (eluhlaza)
Isidlo sangokuhlwa: nasiphi na isiqhamo.
Usuku lwesihlanu lokutya okungenatyuwa:
Isidlo sakusasa: iminqathe eluhlaza - 100 gr. (inokulungiswa ngejusi yelamuni)
Isidlo sasemini: intlanzi - 200 gr. (eyosiweyo), ijusi yetumato- 1 tbsp ..
Isidlo sangokuhlwa: isaladi yeziqhamo.
Isidlo sasemini: inyama yenkukhu - i-500 gr., Isaladi yemifuno.
Isidlo sangokuhlwa: amaqanda - ii-2 iiPC, isaladi yee-2 zeminqathe (ungatya kunye neoyile yemifuno).
Isidlo sakusasa: 1 indebe yeti ngaphandle kweswekile okanye ezinye izongezo.
Isidlo sasemini: inyama - 200 gr. (kubilisiwe okanye kubilisiwe), isaladi yeziqhamo.
Isidlo sangokuhlwa: iziqhamo.
Emva koko imenyu iyaphinda, apho usuku 8 = usuku 6, usuku 9 = usuku 5, usuku 10 = usuku 4, usuku 11 = usuku 3, usuku 12 = usuku 2, usuku 13 = usuku 1.
Edlulileyo Isobho esivuthayo samanqatha - iiresiphi ezininzi ziluncedo ekunciphiseni ubunzima
Okulandelayo Usebenza njani ukunciphisa umzimba?